Ahoana no Amantarana ny Fivavahana Marina?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Afrikaans Albaney Amharique Anglisy Arabo Armenianina Baoulé Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Cebuano Chitonga Cinghalais Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwanyama Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Mbunda Mizo Nahuatl (Guerrero) Ndebele (Zimbabwe) Nias Niue Norvezianina Nzema Oromo Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pendjabi Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Serba Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tongan Totonac Tsonga Turkmène Tzotzil Urhobo Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa
Tsy maintsy manaraka izay fivavahana tian’Andriamanitra ianao, raha te ho namany. Nilaza i Jesosy fa “ny tena mpivavaka” dia mivavaka amin’Andriamanitra araka ny “fahamarinana.” (Jaona 4:23, 24) Iray ihany ny fivavahana ankasitrahan’Andriamanitra. (Efesianina 4:4-6) Hiaina mandrakizay ireo manaraka ny fivavahana marina, fa ho ringana kosa ireo manaraka ny fivavahan-diso.—Matio 7:13, 14.
Ny mpivavaka ao aminy no amantaranao ny fivavahana marina. Tsara toetra i Jehovah, ka tsy maintsy tsara toetra koa ny tena mpivavaka aminy. Manome voankazo tsara ny hazo tsara. Olona tsara toetra koa no ao amin’ny fivavahana marina.—Matio 7:15-20.
Tena manaja ny Baiboly ny naman’i Jehovah. Fantatr’izy ireo fa avy amin’Andriamanitra izy io. Tena mampihatra ny tari-dalan’ny Baiboly izy ireo, ary mitady torohevitra ao rehefa misy olana. Izy io koa no ahafantaran’izy ireo momba an’Andriamanitra. (2 Timoty 3:16) Tsy mitory fotsiny izy ireo fa mampihatra izay lazainy koa.
Mifankatia ny naman’i Jehovah. Be fitiavana i Jesosy, ka nampianariny momba an’Andriamanitra ny olona, ary nositraniny ny marary. Tia olona koa ireo manaraka ny fivavahana marina. Manahaka an’i Jesosy izy ireo ka tsy manambany ny mahantra na manavakavaka. Nilaza i Jesosy fa ny fifankatiavana no hahafantaran’ny olona ny mpianany.—Jaona 13:35.
Manome voninahitra an’Andriamanitra ny namany, ka mampiasa ny anarany hoe Jehovah. Ho namanao akaiky ve ny olona iray, raha tsy mety miantso anao amin’ny anaranao? Tsia! Antsointsika amin’ny anarany ny namantsika, ary milaza zavatra tsara momba azy isika. Tokony hampiasa ny anaran’Andriamanitra sy hiresaka momba azy àry, izay te ho namany. Izany no tian’i Jehovah hataontsika.—Matio 6:9; Romanina 10:13, 14.
Mampianatra ny olona momba ny Fanjakan’Andriamanitra ny namany, toy ny nataon’i Jesosy. Io ilay fitondram-panjakana any an-danitra, izay hanova ny tany ho paradisa. Mitory ny vaovao tsara momba an’io Fanjakana io ny naman’Andriamanitra.—Matio 24:14.
Miezaka ny ho naman’Andriamanitra ny Vavolombelon’i Jehovah. Manaja ny Baiboly sy mifankatia izy ireo, ary mampiasa sy manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra. Mampianatra momba ny Fanjakan’Andriamanitra koa izy ireo. Manaraka ny fivavahana marina resahin’ny Baiboly àry ny Vavolombelon’i Jehovah.